30 minamato Yezvikomborero Zvemimba | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Minamato makumi matatu emaropafadzo emimba
Dheuteronomio 28: 4 Zvichava zvakanaka nezvibereko zvomuviri wako, nezvibereko zvevhu rako, nemichero yemombe dzako, nemhuru dzenzombe dzako, nemapoka amakwai ako.
Chero amai vane nhumbu vanofanirwa kudzidza kuzivisa maropafadzo nepamuviri pake. Izvo iwe zvausingaropafadze, satani anogona kutuka. Kuzivisa makomborero uye kugara uchinamatira ako mucheche / vacheche mudumbu ichaona kuti dhiabhori haachave nenzvimbo mukutakura kweVana vako. Nhasi, ndasanganisa minamato makumi matatu yemakomborero emimba. Iyi minamato ichasimbisa kutenda kwako kuti inyengetere zvinobudirira paunenge uchitakura nhumbu yako kusvika padanho re dhirivahari.
Chero izvo Ishe zvakakomborera, hapana munhu kana dhiabhori anogona kuzvituka, Mwari vakazivisa muIzwi Rake kuti chibereko chemuviri wako chakaropafadzwa, saka newewo unofanirwa kutaura zvakafanana pakushandura minamato. Iyi minamato yemakomborero emimba ndeye zvese zvekuzivisa maropafadzo pamusoro peyako nhumbu. Ndiri kukuona uchiburitsa mushe muzita raJesu.
1. Baba, ndinokutendai nekubudirira kuri kuita nhumbu iyi muzita raJesu.
2. Ndinokutendai nekuda kwengoni dzenyu dzakachengeta ini nemwana wangu / vacheche zvakachengeteka kusvika nhasi muzita raJesu
3.Ndatenda nekuda kwemaropafadzo ako muzita raJesu
4. Ini ndinozivisa mucheche / vacheche vangu vakaropafadzwa muzita raJesu
5. Ini ndinotaura chizvaro changu chakakomborerwa muzita raJesu
6. Ini ndinotaura muviri wangu wakaropafadzwa muzita raJesu
7. Ini ndinozivisa zuva rangu rekuzvarwa rakaropafadzwa muzita raJesu
8. HAPANA chombo chakagadzirirwa kundirwisa uye vana vangu vachabudirira muzita raJesu
9. Ini ndinotemaira kuti hapana matambudziko acharamba nhumbu iyi muzita raJesu
10. Ndinogashira simba remweya wekutakura nhumbu iyi kubudirira kusvika pakuzvara muzita raJesu
11.Kune tsitsi, kutonga hakuna basa. Ah Lord, re ??? fambisa kurwadziwa uye shungu kubva mudumbu rangu uye kubereka muzita raJesu
12. O Ishe, ita muviri wangu semuviri wevakadzi vechiHebheru. Regedza rangu rishamise vananyamukuta muzita raJesu.
13. Ini ndinoramba chero chekufungidzira chichaita kuti ndibereke kuberekwa ndisati ndakura muzita raJesu.
14. Ndakasunga nhau dzega dzekushata panguva yekuzvitakura kwangu nekuzvarwa kwemwana muzita raJesu.
15. Ini ndakaporofita pamusoro pehupenyu hwangu kuti ndinosimbiswa kununura zvakachengeteka muzita raJesu.
16. Ah ishe, ita zuva uye nguva yekuzvara kwemwana wangu chakavanzika kune vese vadziviriri vemimba yangu muzita raJesu.
17. Ah Ishe, ndoziva kuti Munogona kuita zvese. Rega ndinunure ndakachengeteka ndisina kushanda muzita raJesu.
18. Ah Ishe, ini ndinokumikidza mwana wangu nhasi. Rega mwana wangu ave wako kunyange kubva mudumbu rangu nemuzita raJesu.
19. O Ishe, neshoko renyu mhembwe dzakazvara, saka, neniwo ndichazvara ndakachengeteka uye pachave nekudanidzira kwe "kubwinya" muchechi nekuda kwangu muzita raJesu
20. Ini ndakaporofita muhupenyu hwangu kuti ndisati ndatambura, ndichabereka uye kurwadziwa kusati kwasvika, ndinonunura muzita raJesu.
21. Ini ndinotaura izwi rekutenda kune wangu mucheche mudumbu nhasi kuti uchave nemufaro nekufara uye vazhinji vachazofara nekuzvarwa kwako muzita raJesu.
22. Ini ndakaporofita kuti handisi kuzounza mwana akaremara muzita raJesu.
23. O, Ishe, hakuzove nematambudziko panguva uye mushure mekuzvara. Rega mufaro ugokurumidza kutsiva marwadzo ekuzvara muzita raJesu.
24. Isa rusvingo rwemoto pachako iwe pachako.
25. Namata kuti ngirozi dzinoshumira dzikombere.
26. Ini ndinozvipa ndisinga gonekwe kune chero nguva kana mweya wekupokana-nepamuviri, muzita raJesu. (Isa ruoko rumwe mumusoro wako, imwe irwo pachibereko chako.)
27. Rega moto waMwari uchenese muviri wangu wese system uye bvisa -impurities, muzita raJesu.
28. Ini ndinotyora chibvumirano chose chekunonoka kubereka vana nemoto waMwari neropa raJesu.
29. Ini ndinorega uye ndinotuka mweya yetsvina yese ndichishandisa zvandinofungidzira kupokana neni, muzita raJesu.
30. Fema mumoto waMwari uye kufema zvinhu zvisina kunaka.
Previous nyaya30 Hondo dzekunamatira Mune Mimba
inoteveraMaminitsi makumi matatu Eminamato Yekunakirwa Uye Nyasha
Maame Sarpong Ndira 14, 2020 At 9:01 pm
Yako minamato mapoinzi ave anondibatsira kwazvo. Mwari vakukomborere
30 Ane Simba Usiku Munamato Kudzivirirwa
30 minamato mapoinzi ekutenderera kwese kutenderera